Ngenkulungwane ye-18 Indlu yaseFama yesiNtu yaseMntla yaseMelika iBharn
Ian-myeon, Sangju, North Gyeongsang Province, South Korea
Inqaba sinombuki zindwendwe onguTom
Iza kusetyenziswa nguwe yonke le inqaba.
-Indawo yokuhamba wedwa ixesha-
Nangona indawo inkulu, ngokomgaqo, akufuneki abantu abangaphezu kwesibini ukugcina umoya kunye nokwandisa ulwaneliseko lweemvakalelo. Njengoko ingeyondawo yabakhenkethi, le ndawo yokulala iyacetyiswa kwabo bafuna ukuphumla okuthe cwaka nokugxila kuthi sobabini.
Ejikelezwe yindalo, njengeentaba kunye namahlathi, egcwele umbono, ikunika imvakalelo yenqaba efihliweyo ehlathini.
Zonke izinto ezingaphakathi nangaphandle zenziwe ngezinto zendalo ezinobuhlobo be-eco-friendly njengomgaqo, kwaye unokuba nemvakalelo yokuhlala kwindlu endala yaseMntla Melika enoyilo lwasentshona kunye nolwakudala.
Wena kunye nophahla, itshimini yendawo yomlilo yeemitha ezili-13 ukuphakama, uphahla olutsolo lwesakhiwo esijikelezileyo, igumbi le-ocher apho unokukhanyisa ngokuthe ngqo umlilo weenkuni, ifestile yesibhakabhaka apho unokubona iinkwenkwezi esibhakabhakeni ebusuku. ukhuko lwakho okanye isofa, Kentucky ingca eluhlaza ukuba onke amaxesha onyaka, isandla-eDibanisa Yonwabela nokuphosa ilitye eliseludongeni liya kukhala, ingakumbi umgangatho oki, kwaye udale ixesha ingenakulibaleka nje ukuba ababini kuni.
* Unokusebenzisa ngokupheleleyo zonke izibonelelo, kwaye siya kukunceda ukuba unezidingo ezizodwa.
Inesakhiwo sokuma esenziwe ngomgangatho we-oki, kunye negumbi lokuhlala elinye, amagumbi amahlanu, iibhedi ezintathu eziphindwe kabini, iifestile ezimbini zesibhakabhaka apho unokubona iinkwenkwezi esibhakabhakeni sasebusuku, kunye namagumbi okuhlambela amathathu aneshawa. Ikhitshi lixhotyiswe ngezinto zokupheka ezisisiseko kunye nomenzi wekofu.
Ungawatya amanzi etephu amnandi asuka kwintaba yepeony ecocekileyo ngoko nangoko, kwaye unokubona imbonakalo entle yamahlathi, iintaba, kunye nesibhakabhaka siphuma ngefestile njengefreyimu yomfanekiso.
Xa umoya wasebusuku ubanda okanye ufumile, unokwenza umlilo ngokuthe ngqo kwigumbi le-ondol, okanye unokucela umniniyo ukuba awukhanyise kwangaphambili.
Ihlathi laseSeongjubong loLonwabo kukuhamba ngemizuzu eli-10, ukuze ukonwabele ukubona indawo kunye neebhafu ezishushu zasentwasahlobo.
Ngemizuzu eyi-10, unokukhenketha iMyuziyam yaseMyeongju kwaye ubone ubugcisa beHamchang Village.
IMungyeong, iYecheon, kunye neGoesan zingaphakathi kwemizuzu engama-30.
미국에서 30년동안 경영자로 활동. 한국으로 돌아와 어린시절을 보낸 고향 인근에 손수 돌집을 지음. 영어로 자유로운 의사소통이 가능함.
Siza kudibana kufuphi nendawo yokulala kwaye sikukhokele.
Ndazise ukuba ufuna nantoni na ^^